ra’iisalw asaraha Itoobiya oo maanta la kulmaya Madaxda iyo Shacabka Soomaali Galbeed. – Hornafrik Media Network
ra’iisalw asaraha Itoobiya oo maanta la kulmaya Madaxda iyo Shacabka Soomaali Galbeed.
By HornAfrik	 Last updated Aug 24, 2018
Hornafrik-Maanta oo jimce ah waxaa magalaada Addis abaab ee dalka Itoobiya ku kulmaya ra’iisal wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed iyo madaxda dowlad deegaanka iyo shacabka Soomalida.
Kulnka ayaa sida lagu waramaya waxaa uu ka dhacayaa hool weyn oom madxada itoobiya ay kula kulmaan wafuuda heerka caaloami e dalkooda booqda , waxaana marka ay Soomaalida iyo ra’iisalw asaraha Itoobiya kulmaan laga hadlaya arimo la xiriira dhibaatooyinka ka jira dhulka Soomaali Galbeed ee ay Itoobiya Maamusho.
Sida uu kulankan ku yimid aya la tilmaamaya in ay tahay dalab ka yimid ra;iisal wasaraaha Itoobiya Abiy Ahmed oo doonaya in dad soomaalida ah uu kala hadlayo xasilinta deegaanka iyo sidoo kale joojinta dagaalada u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo mudooyinkaan socday.
Qaar kamdi ah odayaasha ka qeybgali doona kulanka manta ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen in muhiimadda ugu weyn ee ay iyaga kala hadli doonan Abiy Ahmed ay tahay sidii cadaalada ay u heli lahayeen.
Waxaa uu imaanaya kulankaan iyadoo ay isbedalo siyasdeed oo xog leh ka socdaan geska Afriak si gaar ahna dowlad deegaanka Soomaali galbeed ay muddo bil ka yar marayan madaxweynihi sadexad marka laga soo bilaabo Cabdi Maxamuud Cumar , waloow midka haatan kmg ah e Mustafae cagjar uu sameynayo balanqaadyo badan oo shacabka sheegyana hadii laga dhabeeyo ay tahay is bedel dhab ah.
Soomaaliland oo garoonka Hargeysa ku qabatay Wasiiro!
Qalalaaso ka socdo magaalada Garbahaarey ee gobolka Gado